Nice Help | Taageerada Ganacsiga Miyiga
Amaah Sanduuqa Horumarinta ee ND
Waaxda Ganacsiga ee ND
Sanduuqaani wuxuu bixiyaa "maalgelin dabacsan" iyada oo loo marayo amaahda iyo maalgashiga sinnaanta ee aan laga heli karin inta badan amaah-bixiyeyaasha caadiga ah waxaana loo heli karaa ganacsi kasta oo aasaasi ah marka laga reebo wax soo saarka beeraha.
Waxay heli kartaa ilaa $ 1,000,000 maalgalinta.
Barnaamijkani wuxuu siiyaa dammaanad deyn ah ganacsiyada miyiga.
Haayada Dakota Medical / Saamaynta IRP
Barnaamijkani wuxuu bixiyaa maalgelin laxiriirta caafimaadka iyo amaanka ee bulshada miyiga.
Ilaa $ 150,000 oo lagu amaahdo (Ugu yaraan 10% hoos u dhigidda lacagta).
Amaahada Horumarinta Dhaqaalaha Reer Miyiga iyo Deeqda (REDLG) Barnaamijka Tamarta Miisaaniyada ee Barnaamijka Mareykanka
Illaa $ 300,000 oo deeqaha ah ayaa la codsan karaa si loo dhiso Lacagaha Amaahda Dib-loo-beddelayo.
Illaa 10 boqolkiiba lacagaha deeqda ayaa lagu dabaqi karaa kharashaadka hawlgalka ee ka socda nolosha Lacagta Amaahda Dib-loo-soo-noolaynayo.
Illaa $ 1 milyan oo amaah ah ayaa la codsan karaa.
Barnaamijka Cashuur Bixinta Suuqyada Cusub
Waxay ku siisaa dhibcaha canshuurta mashaariicda $ 5M ama ka badan ku kacaya mashruuca (guud ahaan waxay diiradda saaraan ganacsiyada cusub ee shaqeynaya, balaadhinta ganacsiga iyo qorshayaasha ganacsiga cusub ee dhanka dhismayaasha ganacisigaaga)
Barnaamijka Isku-Darka ee Dhex-dhexaadka ah ee USDA
Barnaamijkani wuxuu taageeraa oo dhiirigeliyaa horumarka ganacsiga ee bulshooyinka miyiga Waqooyiga Dakota.
Ganacsadayaasha u qalma waxay heli karaan ilaa $ 150,000 iibka guryaha, hantida go'an, raasamaalka shaqada iyo alaabada.
Ka fiiri Degmooyinka u qalma gudaha.
Hay'adda USDA (Waaxda Beeraha Mareykanka) Barnaamijka Iibsiga amaahda ee dammaanadda leh wuxuu siiyaa deyn dulsaar hooseysa ganacsiyada Waqooyiga Dakota oo leh maalgelin bangi oo ay ka mid tahay dammaanad deyn oo laga helayo barnaamijka dowladda federaalka ah sida Barnaamijyada Amaahda Horumarinta Reer Miyiga iyo Barnaamijyada Wershadaha.
Deeqda Kobcinta Bulshada
Maamulka Horumarinta Shaqada Degmada
Barnaamijka waxaa loogu talagalay inuu ka dhigo Crosby meel wanaagsan iyadoo laga caawinayo ganacsatada jira inay ku guuleystaan, ka dhigayaan dhismahooda kuwo soo jiidasho leh macaamiishooda, iyo inay bulshada ka dhigaan kuwo soo jiidasho leh ganacsiyada cusub, shaqaalaha, deggeneyaasha iyo booqdayaasha iyagoo ka caawinaya ganacsatada inay qaadaan tillaabooyin waaweyn dhis, dib-u-habeyn, ama ballaariyo tas-hiilaadkooda.